Tue, Jul 14, 2020 at 8:22am
मिहिनेतको नयाँ दृष्टान्त : किसानको परिश्रमले बलौटे जग्गानै हराभरा
बर्दिवास, २४ जेठ बलौटे जग्गा भएर के भयो र ! महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका–६ को पर्सा र सग्रामपुरका किसानको मिहिनेतले २०५ बिघा बलौटे जग्गामै फलपूmलका बिरुवा लहलहाएका छन्, तरकारी बाली फस्टाएको छ । त्यसैगरी, भङ्गाहा–७ का भूमिहीन दलितले पनि पछिल्ला चार वर्षयता बगरको पर्ति ऐलानी जग्गामा तरकारी बाली लगाएर मनग्य कमाउन थालेका छन् । रातु नदीले बलौटो थुप्य्राएको बगर जग्गामा अब लहलह बाली..
दार्चुला, २१ जेठ काखीमा दुधे बालक । अगाडि सात–आठ वर्षका एक बालिका र पछाडि महिलाहरु । अगाडि गाईवस्तुदेखि भेंडाबाख्राको ताँती छ । यो दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाको सुनभन्दा महङ्गो यार्सागुम्बा खोज्ने सङघर्षपूर्ण यात्रा हो । अपि हिमाल गाउँपालिका–३ का २० वर्षीया तारा बोहरा दुधे बालकसहित यार्सा सङ्कलन गर्न लेकतिर जाँदै थिइन् । पिठ्युमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा छातीमा दुधेबालक छ..
मोदी लहरमा कंग्रेसको लज्जास्पद पराजय हुनुको कारण यस्तो छ :
काठमाडौँ, १७ जेठ सन २०१४ मा गुजरातमा आफ्नो मुख्यमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल चलाइरहेका नरेन्द्र मोदीले जब राष्ट्रिय राजनितीमा हात अघि बढाए । सोही बर्ष चल्दै गरेको लोकसभा निर्वाचन जित्नु कंग्रेस आईको लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह थियो । मुख्यमन्त्री रहँदा आफ्नो कार्यकालको दौरान नरेन्द्र मोदीले गुजरातको चिनारी नै परिवर्तन गरिदिएका थिए। फलस्वरुप आज गुजरात भारतको नम्बर वान बिकसित स्टेट भनेर चिनिन्छ। मोदीको बढ्दो लोकप्रियता..
काठमाडौँ, १७ जेठ । छैनन् भनम् छन् छोराछोरी,फर्किनन् घर बाबुआमा नमरी छोरो अमेरिका छ, छोरी जापानतिर छ तिनले त बिर्से बाबुआमा, हाम्लाई तिनकै पीर छ ।” गायक शिरिष देवकोटा र गायिका सम्झना भण्डारीको स्वरमा यी गीतका हरफ सुन्नेबित्तिकै विदेशिएका छोराछोरी सम्झेर नभक्कानिने बाबुआमा कमै होलान् । उच्च र मध्यम वर्गीय परिवारका धेरै छोराछोरी पढ्न र कामका सिलसिलामा अमेरिका, बेलायत, जापान, अष्ट्रेलियालगातका देशमा जाने गरेका..
तेञ्जिङ र हिलारीले सगरमाथा टेकेको ६६ वर्ष पुग्यो ! सौन्दर्य जोगाउने चुनौती थपिँदै !!
काठमाडौँ, १४ जेठ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सफल आरोहण भएको ६६ वर्ष पुगेको छ । सगरमाथा शिखरमा पहिलो पटक दुई साहसी आरोही तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमण्ड हिलारीले सन् १९५३ मे २९ तारिखका दिन आठ हजार ८४८ मिटर अग्लो सगरमाथाको चुचुरोमा पुगी विश्वलाई मानवीय साहस र क्षमताको अनुपम परिचय दिनुभएको थियो । सोही समयदेखि संसारभरि सगरमाथाको आकर्षण बढ्दो छ । सगरमाथा..
यसरी खुल्दैछ तातोपानी नाका, कसले लुकाएको थियो त्यो फाइल ?
काठमाडौँ, १४ जेठ । नेपाल र चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी नाका जेठ १५ गते खुल्ने भएको छ । ०७२ को भूकम्पदेखि बन्द रहेको यो नाका खुल्दा नेपाल–चीन दुवै देशलाई फाईदा पुग्नेछ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यो ऐतिहासिक नाका खुल्ने समाचारले जिल्लावासी अत्यन्त हर्षित भएका छन । गोप्य रुपमा ती कर्मचारीहरूलाई पनि फाईलको खोजीमा लगाएं । ४ दिनपछि एउटा मन्त्रालयमा कानुन कै कर्मचारीले..
काठमाडौंको गल्लिमा हरिया मकै पोलिरहेकी एक आमाको कथा !
काठमाडौं, १४ जेठ काठमाडौंको गल्लि गल्लिमा बसेर अनि सडकको छेउछाउमा बसेर बुढी आमाहरु यो जेठको गर्मीमा हरिया मकै फु....फु..... गर्दै पोलिरहेको देख्दा जो कोहिको पनि मन पग्लिन्छ। सामान्यतया सबैलाई हेर्दा उहाँले गरेको दु:ख के पो हो र? भन्ने जस्तो हुन सक्छ तर आफ्नो लागि मात्र नभएर आफ्नो परिवार र सन्तानको छाक गुजारा गर्नको लागि र छोराछोरीको पढाई खर्च जुटाउन उहाँले गरेको दु:ख..
पहाडको टुप्पोमा बाजा बज्ने ढुङ्गा ! यस्तो छ रोचक किंवदन्ति
बेनी, १० जेठ ढुङ्गाका चुचुराहरु हेर्दा पञ्चेबाजाका आकृतिहरु छन् । अग्लो पहाडको टुप्पोमा गुफाभित्रका यी आकृतिहरुको आवाज पनि बाजाको जस्तै सुनिन्छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानास्थित काभ्रे गाउँ र रुप्से झरनाको शिरमा रहेको बाजा ढुङ्गाले त्यहाँ पुग्ने जो कसैलाई ढुङ्गाबाट बाजा बज्छ भनेर विश्वास गर्न बाध्य पार्ने गरेको छ । बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अन्र्तगत म्याग्दीको अन्तिम बस्तीको रुपमा रहेको काभ्रे गाउँ हुँदै अहिले बाजा..
दलहरुले बिर्सिए शहीदका योगदान, पाएनन् राहत परिवार गुमाएकाहरुले
बाँके, ८ जेठ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसैको विरोधस्वरुप २०६२ चैत २४ गतेदेखि नेपालमा राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन शुरु भयो । यो आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरुले जनआन्दोलनको संज्ञा दिएका थिए । राजतन्त्र मुर्दावाद ! गणतन्त्र जिन्दावाद ! भन्दै देशभर राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन चलिरहेको थियो । आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । देशभरबाट कतै गोली चलेर आन्दोलनकारी घाइते भएका..
लम्की, ७ जेठ १४ वर्षीया संगीता धामीलाई महिनावारी हुँदा निकै पेट दुख्छ । उनी घरमा अभिभावकलाई पनि खुलेर भन्न सक्दिनन्, विद्यालय नजीकै रहेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचारमा जान पनि हिम्मत गर्दिनन् । एकदिन उनलाई विद्यालयमा निकै गार्हो भयो । के भयो भनेर शिक्षकले सोध । उनले उत्तर दिइन् – “टाउको दुख्यो ।” शिक्षकले उपचार गर्न जाउ भनेपछि विद्यालय नजीकै रहेको नारायणपुर स्वास्थ्य..
काठमाडौँ, ५ जेठ संविधान सभामा हुँदादेखि नै सार्वजनिक खरिद ऎन संशोधनको विषय उठाउँदै आएको थिएँ । कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि सार्वजनिक खरिद ऎनको संशोधनका लागि दुई वटा अन्तक्र्रिया आयोजना गरेँ । ऎनमा केही खराबी छन् जसको कारण हामीले सोचेको जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं । अहिलेको खरिद ऎन बोकेर समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । खरिद ऎनमा रहेको कमजोरीका कारण ६ वटा निर्माण..
इलाम, ५ जेठ सन्दकपुर गाउँपालिकास्थित माईपोखरीकी १७ वर्षीया युवती एक वर्ष अघि आफ्नै छिमेकी समुन राईबाट बलात्कृत भइन् । बिहान घरबाट हिँडेकी ती युवतीलाई सुमनले जङ्गलमा पुर्‍याएर बलात्कार गरे । सुमनले आफूसँग यौन सम्पर्क राख्न आग्रह गरे, युवती नमानेपछि ‘मारिदिने’ धम्की दिए । धम्कीपछि युवतीको इच्छाविरुद्ध नै सुमनले जबर्जस्ती गरे । घर गएर भने ‘बाँच्न दिन्न’ समेत भन्न भ्याए । त्यसपछि युवती..
बेझाड, ५ जेठ । सानो टिनले छापेको झुप्रो, त्यही झुप्रोमा दुई छोरा, दुई छोरी, एक सासूआमासहित रामपुर नगरपालिका– ५ बाङ्गेपसल बस्ने जमुना नेपालीले मजदूरी गरेर जीवन गुजारा चलाउँदै आउनुभएको छ । छ जनाको परिवारको लालनपालन र छोराछोरीलाई उचित शिक्षादिक्षा दिन जमुनाका श्रीमान् मटनबहादुर नेपाली तीन वर्षअघि मात्रै वैदेशिक रोजगारीका निम्ति मलेसिया पुग्नुभयो । परिवारको मीठो सपना बोकेर विदेश जानुभएका नेपाली दुई वर्षदेखि त्यहाँको..
बुद्ध कसरी 'नेपाली' भए ? के साँच्चै बुद्ध नेपालमा नै जन्मेका थिए ?
काठमाडाैं, ४ जेठ बुद्ध कहाँ जन्मेका हुन् ? यो प्रश्न नेपालभित्र गरियो भने धेरैको जवाफ सीधा हुन्छ– नेपालमा ! यो प्रश्न नेपालबाहिर गरियो भने पनि बुद्धबारे जान्ने–बुझ्नेहरूले सही उत्तरमा ‘नेपाल’ नै भन्नुपर्छ । अचेल कति युवा ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका थिए’ भन्ने गन्जी पहिरेर अभिमानसहित हिँडिरहेका भेटिन्छन् । कति लेखक–साहित्यकार नेपालको परिचय दिनुप(यो भने भन्छन्– यो बुद्धको देश हो ! यथार्थमा बुद्ध र बुद्ध..
बेझाड, पाल्पा, ३ मुक्तिनाथदेखि प्राकृतिक बहावमा बगिरहेको कालीगण्डकीको महिमा अपार छ । शालिग्राम पाइने नदीका नामले समेत परिचित कालीगण्डकीका किनारमा मुक्तिनाथ, ऋषिकेश, देवघाटधाम जस्ता तीर्थस्थल हुनुले यसको महिमा र गरिमा उत्तिकै बढाएको हो । पूर्वीय संस्कृति र सभ्यतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यहाँको जल अर्थात् पानीलाई आर्थिक र सामाजिक विकासमा उपयोग गर्ने सोचका साथ तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा यतिखेर जुर्मुराउन थालेका छन् । हुन..
रामपुर, १ जेठ पाल्पा जिल्लाबाटै लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको मादल बनाउने पेशा रामपुर नगरपालिका–८ कटहरटारका रामबहादुर गन्धर्वले सम्हाल्नुभएको छ । विगत १७ वर्षदेखि मादल बनाउने र बिक्री गर्ने रामबहादुरले स्याङ्जा तथा पाल्पाका विभिन्न स्थानमा मादल बोकेर पुर्याउने गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले बुबाले पनि यसै गरेर मादलसँग धान, चामल साटेर परिवार पाल्नुभयो, मैले त अहिले मादल बेचेर पैसा कमाएको छु ।” कास्कीको..
टिपर आतंक : आम नागरिकको चालकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक
रुपन्देही, १ जेठ १ हप्ताअघि बुटवलको पाखापानीमा टिपरको ठक्करबाट एक युवतीको मृत्यु भयो । परीक्षा दिएर आफ्ना बुबासँग घर फर्कंदै गरेकी पुष्पा भण्डारी सवार स्कुटरलाई टिपरले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै ज्यान गयो । आँखा अगाडि नै छोरीको मृत्यु देखेका बाबु घनश्यामसहित परिवारका सदस्य अहिले विक्षिप्त अवस्थामा हुनुहुन्छ । गत चैत १९ गते बुटवल धागो काराखाना नजीकै टिपरको ठक्करबाटै बुटवलका प्राध्यापक डोलराज अर्यालको मृत्यु..
दाङ, ३१ वैशाख । गत पुस ६ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ राम्रीमा भएको बस दुर्घटनामा परी विद्यार्थी, शिक्षक र चालक गरी २३ को मृत्यु भयो । त्यसैगरी गत मङ्सिर २८ गते दुलही लिएर जाँदै गरेको बिहेको गाडी लमही नगरपालिकास्थित रिहार नजिकै दुर्घटना हुँदा दुलाहका बुबा आमासहित छ को मृत्यु भयो । गत माघ २४ गते बुटवलबाट प्रदेशसभामा सहभागी भएर फर्कदै गर्नुभएका दाङ क्षेत्र..
काठमाडौँ, ३० वैशाख आम नेपालीमा उत्साह र भरोसा बढाउने गरी अगाडि बढेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा समस्या खडा गर्ने र समयमै काम सम्पन्न हुन नदिने सङ्केत देखा परेका छन् । यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरामा सन्देह उत्पन्न भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि कहिले सामग्रीको आयातमा अवरोध त कहिले बजेट अभावमा ठेकेदारले नै काम छाड्ने..
पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन् - कक्षा १ को ‘फेल’ नै जीवनको पहिलो र अन्तिम ‘फेल’
बागलुङ, २६ वैशाख आफैँले ‘कखरा’ सिकेको विद्यामन्दिर माविमा बुधबार प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठ । यसपालि श्रेष्ठ विद्यालय आउनुको उद्देश्य भिन्न थियो । कमैलाई यस्तो सौभाग्य मिल्छ्, जुन उहाँलाई मिल्यो । भूकम्पपछि पुनःनिर्मित भवनको उद्घाटन श्रेष्ठले गर्नुभयो । उद्घाटनपछि उहाँले भन्नुभयो, “मैले सोचेको थिइनँ, म यो विद्यालयको पूर्वविद्यार्थी मैले नै यसको नयाँ भवन उद्घाटन गर्नुपर्ला भनेर ।” सोही क्रममा..
बगरमै लटरम्म खरबुजा फलायर एक मौसममा डेढ लाख बचत
दाङ, २५ वैशाख कुनै बेला राप्ती नदीको कटानले स्थानीय बासिन्दाको घरजग्गालाई बगर बनाइदिएको यो ठाउँमा अहिले हरियाली छाएको छ । यहाँका किसानहरुका पौरखका कारण हरियाली मात्र हैन, बगरमै लटरम्म खरबुजा नै फलेका छन् । बगर खेतीबाटै आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा रहेका उनीहरुमा अहिले ठूलो जोश र जाँगर छ । त्यही खेतीबाट उनीहरु आज लखपति बनेका छन् । लमही नगरपालिका वडा नं ४, बलरामपुर..
सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न अभिभावकबीच होड
बाँके,२४ वैशाख । ‘विद्यार्थी भर्नाको चाप निकै धेरै छ । हामी भर्ना गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । अभिभावकहरु सोर्सफोर्स लगाएर भर्ना गर्न आइरहनुभएको छ ।’ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१ स्थित धम्बोझी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वामदेव सुवेदीको गुनासो हो यो । “सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना लिँदैन भनेर अभिभावकलाई फर्काउन पनि निकै समस्या छ,” प्रअ सुवेदी भन्नुहुन्छ – “भर्ना लिँदा कक्षा कोठा अभावसँगै शिक्षकको समस्या उस्तै छ ।”..
भोजपुर, २३ वैशाख । भोजपुर नगरपालिका–१२ टक्सारका बलराम राईसँग सात वर्ष अघिसम्म दश दिन लगाएर ढाकरमा नून बोकी हिँडेका स्मृति ताजै छ । सडक विस्तार भएसँगै अहिले राईको घरमै नूनदेखि चाहिने सबै उपभोग्य सामान आउन थालेको छ । राईको घर छेउमै बाटो विस्तार पनि भइरहेको छ । त्यहाँ सडक बनाउने उपकरणहरु चलिरहेका छन् । यी गतिविधि हेरिरहँदा पनि राईलाई खुशी लाग्छ । “चतराबाट..
६ वर्ष भयो विन्दवासिनीले आँखा नचिम्लेको !
हेटौँडा , २२ वैशाख । सानै उमेरमा चोट, हण्डर र ठक्करको सामना गर्न पुगेकी विन्दवासिनी कंसाकारलाई मास्क, स्कार्फ, चश्मा अनि, क्याप लगाएर हेटाँैंडाको सडकमा हिँड्दा धेरैले दोहो¥याएर वा तेहे¥याएर हेर्ने गर्छन् । कतिपयले दयाभाव देखाउँछन्, चुकचुकाउँछन् र सहानुभूति पनि दिन्छन् तर, विन्दवासिनीलाई न त दयाभाव चाहिएको छ, न सहानुभूति । आत्मविश्वाससहित लक्ष्य प्राप्तिका लागि यात्रारत विन्दवासिनीलाई चाहिएको छ त केवल ‘न्याय’..
“सगरमाथामा तेञ्जिङ्ग नोर्गेकै पालादेखिको फोहर बाँकी”
काठमाडौँ, २० वैशाख विगत २ दशकदेखि पर्यटन व्यावसायमा सँलग्न रहँदै आउनुभएका पुर्ण कुमार (पिके) शेर्पा स्वयम् आफै एक पर्वतारोही समेत हुनुहुन्छ । देशका दर्जनौं हिमाल चढ्नेक्रममा शेर्पाले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको समेत आरोहण गरिसक्नुभएको छ । आफूले विशेषगरी नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको सहयोगी भई पर्वतारोहण सुरु गरेको शेर्पा बताउनुहुन्छ । हाल 'युएनओ ट्राभल एण्ड एड्भेन्चर'का सञ्चालक रहनुभएका शेर्पा ग्लोबल्ली कन्सर्न सेन्टर फर क्लाइमेट..
भद्रपुर, २० वैशाख झापाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपप्रमुखहरुको अधिकाँश समय न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा मिलाउन मै बित्ने गरेको छ । संविधानले नै स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई प्रारम्भिक तहका मुद्दा छिनोफानो गर्ने गरी न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी तोकिदिएका कारण अधिकाँश विवाद सिधै समितिमा आउन थालेको छ । समितिले छलफल र मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दैआएको छ । आदिवासी जनजाति बहुल बाह्रदशी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना..
किन ‘जस्ट स्लो मोशन’ मा राजधानीका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य ?
काठमाडौं, १९ बैशाख । नेपालमा झण्डै २ दशकपछि गत २०७४ साल जेठमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि पाए । त्यसबेला जम्मा तीन चरणमा चुनाव भयो । बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ लागू भए पश्चात सम्पन्न भएको उक्त पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन..
रामपुर, १९ वैशाख नेपाली साहित्यमा राम्रो छवि बनाउनुभएका साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेको झल्को दिँदै यहाँ एक युवक चम्किएका छन् । उमेरले २० वर्ष पुगेका पाल्पा रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ बर्दाकोटका यमबहादुर खाम्चा अहिले पनि न त राम्रोसँग बोल्न, हातको सहायतामा काम गर्न न त हिँड्न नै सक्नुहुन्छ । राम्चामा भएको लगनशीलता, मेहनेत र क्षमता भने अचम्मको छ । बाह्र वर्षसम्म ओछ्यानबाट उठ्न ..
कञ्चनपुर, १९ वैशाख । कञ्चनपुरको कालागौडीका बृजलाल चौधरी झारफुकका लागि पुग्ने व्यक्तिहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल जान सल्लाह दिन्छन् । चौधरी गाउँका गुरुवा हुन् । गुरुवाले भविष्यमा हुने घटना टार्न तान्त्रिक विधि अपनाउने गर्छन् । भूत लागेका र रोगबाट सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरु उनीकहाँ दैनिक पुग्ने गर्दछन् । “उपचारका लागि पुग्नेहरुलाई रोगको लक्षणका आधारमा अस्पताल गएर स्वास्थ्य जाँच गराउन सल्लाह दिँदै आएको छु,”..
​‘न न्यूनतम तलब, न त सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रत्याभूति’
दुल्लु, १८ वैशाख । सेतै फुलेका कपाल, हाडछाला मात्र देखिने चाउरिएका अनुहार, वर्षौदेखि ढुङ्गा माटोमा काम गर्दा गर्दै कालै भएका हातखुट्टा बस्यो उठ्न गाह्रो, उठ्यो बस्न गाह्रो, बोल्नै पनि धौ धौ तर पनि उनलाई दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्न भने छुटेको छैन । उमेरले ६० काटेका दैलेख नारायण नगरपालिका–७ का खड्कबहादुर मल्लले बागबानी अनुसन्धान केन्द्र दैलेखमा मजदूरी गर्न लागेको तीन दशक बित्यो ।..
Results 314: You are at page3of 11